थोत्रो कम्प्युटरको लिलामीको मूल्य ३ करोडबाट सुरु, यस्तो छ महंगो हुनुको कारण, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
थोत्रो कम्प्युटरको लिलामीको मूल्य ३ करोडबाट सुरु, यस्तो छ महंगो हुनुको कारण
डिसी नेपाल , ११ भाद्र २०७५
एजेन्सी। अमेरिकामा एउटा थोत्रो कम्प्युटरको लिलामी हुँदैछ । आश्चर्यको कुरा यो कम्प्युटरको लिलामीको मूल्य ३ लाख डलर (३ करोड ३० लाख नेपाली रुपैयाँ)बाट सुरु हुँदैछ । लिलामी सेप्टेम्बरमा हुनेछ । अमेरिकाको बोस्टनको आरआर अक्सन कम्पनीले त्यो कम्प्युटरको लिलामी गर्नेछ ।
एप्पलका एक्सपर्ट कोरे कोहेनका अनुसार यसमा सबै पार्टहरु ओरिजिनल छन् । यसको कीबोर्ड पनि ४० वर्ष पुरानो छ । परीक्षणका क्रममा यसलाई ८ घण्टासम्म चलाएर हेर्दा कुनै कमी देखिएन । यो त्यही कम्प्युटर थियो जसले जब्सले नाम र दाम कमाएका थिए । त्यसपछि एपल २ बनाइयो जसको उत्पादन ठूलो परिमाणमा गरिएको थियो ।